ဝါးခယ်မ : Gmail မလိုပဲ Telenor ဖြင်. Facebook Account ဖွင်.နည်း
Gmail မလိုပဲ Telenor ဖြင်. Facebook Account ဖွင်.နည်း
ဒီနည်းလေးကတော. Gmail မလိုပဲ Telenor နဲ.ပဲ Facebook Account ဖွင်.တဲ့နည်းလေးမို. အားလုံးစိတ်ဝင်စားနိုင်တာကြောင်. ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။မူရင်း တင်ပြသူ လင်းညီညာ အားလည်း ဖော်ပြ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ် ။
ပထမဆုံးကတော. Application ရဲ. အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Sign Up for Facebook ကို နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော. သူတို.ရဲ. စည်းမျဉ်းပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို သဘောတူကြောင်း Ok နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
E Mail လိပ်စာတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော. အဲ့ဒါကိုမဖြည်.ပဲ သူ.အောက်က use your mobile phone number ဆိုတာကို နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးရင်တော. Box ထဲမှာ ဖွင်.နေတဲ့ Telenor ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည်.ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး continue ကို နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးရင်တော. Facebook မှာ ကိုယ်.အမည်အဖြစ် သုံးမယ်. နာမည် ကို ဖြည်.ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးရင်တော. continue ကို ဆက်နှိပ်ပေးရပါမယ် ။
မိမိ account အတွက် password ရွေးချယ်ဖြည်.စွက်ပေးရပါမယ် ။continue ကို ဆက်နှိပ်ပေးရပါမယ် ။
မွေးနေ.ထည်.ပေးရပါမယ် ။ continue ကို ဆက်နှိပ်ပေးရပါမယ် ။
ကျား/မ ခွဲခြားပေးရပါမယ် ။
ဒီလို ဖြစ်လာပြီဆို အောင်မြင်ဖို. သေချာသလောက်ရှိလာပါပြီ ။
ပြီးရင်တော. မိမိ account အတွက် confirmation code ဂဏန်း ၆ လုံးကျလာပါမယ် ။ ဒါကိုသေချာမှတ်ထားရပါမယ် ။ နောင် မိမိ account အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ တွေ.ချိန်မှာ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Profile Info မှာ မိမိထည်.ချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ထည်.နိုင်ပါတယ် ။ပြီးရင်တော. save ပေးရပါမယ် ။
ပြီးရင်တော. မိမိadd ချင်သူများကို add လို.ရပါပြီ ။ တစ်ခုပဲရှိတာက တစ်ကြိမ်တည်းမှာ နေရာအမျိုး က အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ လူအများကြီးကို တစ်ပြိုင်တည်း add တာမျိုး ကိုတော. ရှောင်ကြည်ဉ်ရပါမယ် ။
နောင် မိမိ account ကိုပြန်ဝင်ချင်ရင်တော. မိမိဖုန်းနံပါတ် ရိုက်ထည်. ၊ မိမိပေးထားတဲ့ password နဲ. ပြန်ဝင်လို.ရပါပြီ ။
မူရင်းပုံတွေအရ ရှင်းလင်းပေမယ်. ပြည်တွင်း အချို.နေရာတွေမှာ connection အခြေအနေကြောင်. ပုံတွေမပေါ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တာကြောင်. စာပါပူးတွဲ ရေးပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Gmail မလိုပဲ Telenor ဖြင်. Facebook Account ဖွင်.န...
Max Zaw Zaw - ဦးဇော်ဇော် အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်...
ရွှေခယ်ရတနာ စာကြည်.တိုက် ဖွင်.ပွဲ
ရွှေရေးထင်ထင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ? ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ?
သခင်သိန်းဖေ ( ၀ါးခယ်မ ) မိသားစု ကောင်းမှု - ပရဟိတ ...
အင်းစိန်ထောင်တွင်းက သခင်နု ၏ ပြဇာတ်
လိင်တံကို ၂ ကြိမ် အဖြတ် ခံရသူကို အပြာကား ရိုက်ကူးရ...